4. संख्या - Investigative Journalism Manual
खोज पत्रकारिता मूलतः गुणात्मक हुन्छ । यसले कुनै काममा किन र कसरी गल्ती भयो र यसका लागि को जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्नका जवाफ खोज्छ । तर सबै स्टोरीमा केही संख्यात्मक जानकारी हुन्छन् । जस्तै, कति घाटा भयो ? आफ्नो देशमा गैरकानूनी ढंगले ढुंगा–बालुवा झिक्ने काम’boutका के कस्ता तथ्यांक छन् ? नेपालमा क्यान्सरका बिरामी कति छन् ?
खुशीको कुरा के छ भने सञ्चारमाध्यममा गणितलाई व्यवहारमा उपयोग गरिन्छ । शुरूमा गणितका आधारभूत कुरा जान्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, क्लिनिकका नर्सको आधिकारिक काम र कार्यकुशलताका ’boutमा जान्नका लागि यस पेशामा लागेका मानिसले सामान्य दिनमा के कस्ता काम गर्छन् भनेर समय तालिका बनाउने काम विज्ञलाई लगाउन सकिन्छ ।
यस्तैगरी, वायु प्रदूषणको स्याम्पल विश्लेषण गर्नु प¥यो भने तपाईंले हावामा कस्ता कस्ता प्रदूषक तत्व छन् भनी थाहा पाउनुपर्छ । त्यसपछि यी तत्व खतरनाक छन् कि छैनन् र कति समय यस्ता प्रदूषकको सम्पर्कमा आउँदा स्वास्थ्यमा असर पर्छ भनी स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञलाई सोध्नुपर्छ । यो मात्रालाई आफ्नो ठाउँको वायुको गुणस्तरसँग तुलना गर्नुहोस् । यो समस्या धेरै अघि शुरू भएको कुरा तपाईंलाई थाहा हुनसक्छ । यससम्बन्धी तथ्यांक लामो समयदेखि त्यति नफेरिएका हुनसक्छन् । अथवा निश्चित समयमा हरेक वर्ष वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्ने गरेको हुनसक्छ । वायु प्रदूषणको मात्रा पहिले भन्दा घटेको हुनसक्छ । पत्रकारले यी संख्याका ’boutमा व्याख्या गर्नुपर्छ र समस्या साँच्चै बढेको हो कि समस्या उस्तै छ तर मानिस यसप्रति सचेत भएका मात्र हुन् भनी बताउनुपर्छ । आँकडा मात्रैले केही बताउँदैनन् । त्यसको सन्दर्भ बताइदिनुपर्छ । यो समस्यातिर मान्छेको ध्यान आजभोलि किन गएको हो ? जस्ता कुरा बताउँदा मात्रै स्टोरी हुन्छ ।